– मेनुका थापा
सकेसम्म उनीहरूलाई यौनजन्य जोखिमबाट मुक्त गरेर वैकल्पिक पेसामा उभ्याउने उद्देश्यका साथ मैले यस्तो निधो गरेकी हुँ। त्यसैले यौनकर्मी महिलासँग भेटघाट गर्नु, उनीहरूको कुरा सुन्नु र आवश्यक सरसल्लाह दिनु मेरो कर्तव्यभित्र पर्छ। यसै क्रममा मैले प्रशस्तै यौनकर्मीसँग भेटेको छु। उनीहरूको अनुभव सुन्ने र बुझ्ने अवसर पाएका छु। तीमध्ये यस्ता छन् मैले फेला पारेका अनौठा यौनकर्मी :
मेरो घरमा नपुग्दो केही छैन। नोकर, चाकर, हीरामोती, सुनचाँदी, गाडी, बैंक ब्यालेन्स सबै छ। तर, ती सबै कुराले मात्रै नहुँदो रहेछ। ती भएर पनि मेरो शारीरिक आवश्यकता पूरा भएन। यो कुरा मेरो श्रीमान्ले बुझिदिएनन्। पैसाका लागि होइन, शारीरिक आवश्यकता पूरा गर्न मसाज पार्लर खोलेकी हुँ मैले। त्यहाँ आउने ग्राहक चित्तबुझ्दो छन् भने म आफैं यौनसम्बन्धका लागि तयार हुन्छु। म यसैमा खुसी छु। यसमा अरूको टाउको दुख्नुपर्ने किन?
प्रकाशित : सोमबार, साउन २८, २०७५१३:०२
राजनीति सुरू गरेपछि रबिन्द्र मिश्रले पहिलाे पटक लेखे यस्ताे कविता …
एउटा प्रदेशीले लेखेकाे कविता – दशैँ अायाे रे गाउमा
“पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग र मेरो विचार मिलेको छ”- पशुपतिशमशेर ! भन्छन् सरकारले सिन्को भाँचेन !